कसरी फेसबुक मा अनुयायीहरु सक्रिय गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 502
कुनै शंका बिना फेसबुक यो सबै समयको सबैभन्दा प्रसिद्ध इन्टरनेट प्लेटफर्म हो, स्पष्ट रूपमा यससँग अनन्त विकल्पहरू छन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक अर्कासँग सबै प्रकारका कार्यहरूको मजा लिन दिन्छ। यी मध्ये, आज प्रसिद्ध "अनुयायीहरू" हाइलाइट हुनेछन्, कुनै विकल्प जुन कुनै साधारण प्रयोगकर्ताले छनौट गर्न सक्दछ, पृष्ठ बिना नै।
यसको लागि, पछ्याउने प्रक्रिया कुनै पनि जटिल छैन, किनभने वास्तवमा तपाईले के गर्नु पर्छ सेटिंग्स पत्ता लगाउनु हो, सम्पादन गर्नुहोस् र विकल्प सक्रिय गर्नुहोस्। उस्तै अर्को खण्डमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिनेछ।
फेसबुकमा अनुयायीहरूको फंक्शन सक्रिय गर्नुहोस् यो कसरी गर्ने?
सर्वप्रथम, यो जोड दिन जरुरी छ कि यस प्रकार्यको महत्त्व यो सेवामा निहित छ, ताकि जसले सामग्रीको मजा लिन्छ कि अर्को साझा गर्दछ, नयाँ प्रोफाइल अपडेटहरूको टाढा राख्न सक्दछ। यो साथी हुनु आवश्यक बिना। तर त्यसोभए सामग्री बाह्य व्यक्तिले देख्न सक्छन् जो प्रोफाइलमा थपिएका छैनन्, गोपनीयता सेटिंग्स परिमार्जन हुनुपर्दछ।
जे भए पनि, बाटो फेसबुक अनुयायीहरू सक्रिय गर्न निम्न कार्यहरू छन्:
यो हुनु पर्छ फेसबुक खातामा लगईन गर्नुहोस् सामान्य रूपमा पहुँचको रूपमा।
व्यक्ति मेनू बारमा जानु पर्छ, जहाँ तिनीहरू अवस्थित हुनुपर्दछ "कन्फिगरेसन र गोपनीयता"।
जब यो खुल्छ, तपाइँले "कन्फिगरेसन" सेक्सनको लागि विशेष रूपमा खोज्नुपर्नेछ र त्यसपछि विकल्प "सार्वजनिक प्रकाशन"।
त्यहाँ, तपाईंसँग विकल्पहरूको दृश्य हुनेछ, जस बीचमा तपाईंले एक प्रदर्शन गर्नुपर्दछ को रूपमा "मलाई अनुसरण गर्न सक्ने"।
सामग्री हेर्नका लागि, सेयर गर्न र विभिन्न व्यक्तिद्वारा प्रतिक्रिया गर्न, यसलाई दिईनु पर्छ विकल्प "सार्वजनिक"।
फेसबुक मोबाइल अनुप्रयोगबाट
प्रक्रिया मूल रूपमा उही जस्तो छ जब यो वेबमा गरिन्छ, के विचार गरिनु पर्छ कुन फेसबुक अनुप्रयोगहरू मध्ये एक उपकरणमा स्थापना गरिएको हो। ठीक छ, दुबै लाइट संस्करणमा र फेसबुक अनुप्रयोगमा, मेनु तीन क्षैतिज रेखाको आइकन द्वारा पहिचान गरियो।
जे भए पनि यस विकल्पलाई सक्रिय पार्नु कुनै गाह्रो छैन र भन्यो कि प्रक्रिया वास्तवमै समान छ, के विचार गरिनु पर्छ कुन प्रकाशनहरू कसैको लागि उपयुक्त हुनको लागि कसरी पहिचान गर्ने जान्नुहोस् र कुन थप केवल मित्रहरू र परिचितहरूको लागि हुनेछ। यसका लागि, भने प्रकाशनहरूको गोपनीयता लगातार परिमार्जन गरिनुपर्दछ जब उनीहरू पोष्ट गर्न चाहान्छन् र यो हो।
आवश्यक छ मान्छे असहमत मामला मा दिमागमा केहि चीज राख्नुहोस्। केहि प्रयोगकर्ताहरू हुन सक्छन् जो रिसाउन वा अनुयायीहरूको बीचमा मानको केहि पनि थप्न सक्दैनन्। यसका लागि फेसबुकको आकस्मिक योजना पनि छ।
यदि एक निश्चित प्रयोगकर्ता मनपर्दैन र रिस उठ्छ घटनामा, तपाईं सधैं गर्न सक्नुहुन्छ नकारात्मक र थकाउने टिप्पणीहरूको सामना गर्नबाट जोगिन रोक्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले यस व्यक्तिको प्रोफाइल पत्ता लगाउनुपर्नेछ र उसको प्रोफाइलको तीन इलिप्सिस थिच्नु पर्छ, जहाँ अन्य विकल्पहरू मध्ये तपाईंले "ब्लक" विकल्प थिच्नु पर्छ, र भोइला अब यो समस्या हुनेछैन।
1 फेसबुकमा अनुयायीहरूको फंक्शन सक्रिय गर्नुहोस् यो कसरी गर्ने?
1.1 फेसबुक मोबाइल अनुप्रयोगबाट